Umzi-mveliso we-OIML-China Abenzi be-OIML, abaxhasi
Ubunzima bokulinganisa i-OIML CLASS E1 imilo ye-cylindrical, intsimbi engenasici
Ubunzima be-E1 bunokusetyenziswa njengomgangatho wesalathiso ekulinganiseni ezinye iintsimbi ze-E2, F1, F2 njl. Iifektri, iifektri zeSikali, njl
Ubunzima bokulinganisa i-OIML CLASS F1 cylindrical, intsimbi engenazintsimbi ephothiweyo
Amatye e-F1 anokusetyenziswa njengomgangatho wesalathiso ekulinganiseni ezinye iintsimbi ze-F2, i-M1 njl. Ukulinganiswa kwezikali, iibhalansi okanye ezinye iimveliso ezinobunzima obuvela kwiifektri zoMayeza, iiFektri zeSikali, njl
Ubunzima bokulinganisa i-OIML CLASS M1 cylindrical, intsimbi engenazintsimbi ephothiweyo
Ubunzima be-M1 bunokusetyenziswa njengomgangatho wesalathiso ekulinganiseni ezinye iintsimbi ze-M2, M3 njl. Njl.njl.
Ubunzima bokulinganisa i-OIML CLASS F2 cylindrical, intsimbi engenazintsimbi ephothiweyo
Amatye e-F2 anokusetyenziswa njengomgangatho wesalathiso ekulinganiseni ezinye iintsimbi ze-M1, M2 njl. Njl.njl.
Ubunzima bokulinganiswa kwe-OIML CLASS E2 cylindrical, intsimbi engenasici
Ubunzima be-E2 bunokusetyenziswa njengomgangatho wesalathiso ekulinganiseni ezinye iintsimbi ze-F1, i-F2 njl. Iifektri, njl
Ubunzima be-CAST-IRON M1 ubunzima be-100kg ukuya kwi-5000 kg (imilo yoxande)
Ubunzima bobunzima be-OIML F2 imilo engunxantathu, intsimbi engacocwanga kunye ne-chrome yentsimbi
Ubunzima obunzima beJiajia benzelwe ubunzima bokuqinisekisa ukuba ukusebenza kukhuselekile kwaye kusebenza ngokufanelekileyo, kusenza isisombululo esifanelekileyo kwiinkqubo zokulinganisa eziphindaphindiweyo. Ubunzima benziwe ngokuhambelana nemigangatho ye-OIML-R111 yezinto eziphathekayo, imeko yomphezulu, ukuxinana kunye nemagnetism, ezi zinto zinobunzima obukhethekileyo kwimilinganiselo yemilinganiselo yeelebhu kunye namaZiko eSizwe.
Utyalo-mali ukuphosa iintsimbi zoxande i-OIML F2 imilo yoxande, intsimbi engenabala engenazintsimbi
Ukutyeba koxande kuvumela ukubekwa kwindawo ekhuselekileyo kwaye kuyafumaneka ngokwexabiso eli-1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg kunye ne-20 kg, okwanelisa iimpazamo ezivumelekileyo zeklasi ye-OIML F1. Ubunzima obukhazimlisiweyo buqinisekisa uzinzo olugqithisileyo kubomi bayo bonke. La masisindo sisisombululo esifanelekileyo sokuhlamba kunye nokusetyenziswa kwegumbi elicocekileyo kuwo onke amashishini.
Ubunzima bexande i-OIML M1 imilo yoxande, icala elihlengahlengisa isinyithi
Iintsimbi zethu zokulinganisa intsimbi zenziwe ngokuhambelana neNgcomo yaMazwe ngaMazwe ye-OIML R111 ngokubhekisele kwizixhobo, umphezulu woburhabaxa, uxinano kunye nemagnetism. Ukutyabeka kwamacandelo amabini kuqinisekisa umphezulu ogudileyo ongenazo iintanda, imingxuma kunye nemiphetho ebukhali. Ubunzima nganye kukho kwisisu uhlengahlengiso.
Ubunzima buxande OIML M1 imilo yoxande, umphezulu wokuhlengahlengisa umphezulu, intsimbi yentsimbi
Ubunzima buxande OIML M1 imilo yoxande, intsimbi engenasici ephothiweyo
Ubunzima buxande OIML F2 Imilo yoxande, intsimbi engatyiwa ipolishi
Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Ubunzima obuqinisekisiweyo, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Isikali sokulinganisa sokulinganisa, UkuLungiswa kweMisa,